कसरी डिजिटल टेक्नोलोजीले क्रिएटिभ ल्यान्डस्केपलाई असर गरिरहेको छ Martech Zone
कसरी डिजिटल टेक्नोलोजीले क्रिएटिव्ह ल्यान्डस्केपलाई असर गरिरहेको छ
बुधबार, नोभेम्बर 28, 2018 बुधबार, नोभेम्बर 28, 2018 Douglas Karr
टेक्नोलोजीको प्रगतिको बारेमा सुन्ने जारी विषयवस्तुमध्ये एउटा यो हो कि यसले रोजगारलाई जोखिममा पार्नेछ। जबकि यो अन्य उद्योगहरूमा सत्य हुन सक्छ, म गम्भीर रूपमा श doubt्का गर्छु कि यसले मार्केटिंग भित्र प्रभाव पार्दछ। मार्केटिंगहरू मध्यम र च्यानलहरूको संख्या बढ्दै जाँदा विपणन स्रोतहरू स्थिर रहिरहँदा अहिले नै अभिभूत भएका छन्। टेक्नोलोजीले दोहोरिएको वा म्यानुअल कार्यहरू स्वचालित गर्न अवसर प्रदान गर्दछ, मार्केटर्सलाई रचनात्मक समाधानहरूमा काम गर्न बढी समय प्रदान गर्दछ।
लामो समय गयो जब मार्केटिंग र विज्ञापन टोलीहरु आफ्नो पारंपरिक च्यानलहरु को लागी केहि छनोट टुक्रा को विकास को लागी खर्च गरे। डिजिटलले सृजनात्मकको हरेक पक्षमा क्रान्तिकारीकरण गरेको छ, कसरी यसलाई सिर्जना गरिएको बाट कसरी वितरण गरिन्छ। कसरी वास्तवमा परिवर्तन भएको छ? कुन परिवर्तनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पायो? के डिजिटलले रचनात्मक तारालाई मारे? पत्ता लगाउन, MDG को इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस्, कसरी डिजिटल रचनात्मक परिदृश्य रूपान्तरण भएको छ.
यो इन्फोग्राफिकले सिधा चुनौती र अवसरहरू रचनात्मक परिदृश्य वरिपरि बोल्छ। MDG विज्ञापन सँगै यो इन्फोग्राफिक राखिएको छ कि कसरी रचनात्मक परिदृश्य प्रविधिमा प्रगतिको साथ परिवर्तन हुँदैछ। तिनीहरूले पाँच अलग परिवर्तन सूची:
क्रिएटिवहरू धेरै थप प्लेटफर्महरूको लागि धेरै अधिक ढाँचाहरू विकास गर्दैछन् - सर्जनशीलमा डिजिटलले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन यो हो कि यसले दुबै प्लेटफर्म ब्रान्डहरूमा संलग्न हुन आवश्यक संख्या र उनीहरूको विकास गर्न आवश्यक सामग्री प्रकारहरूको संख्या दुवै बढाएको छ।
निजीकरण र प्रोग्रामेटि Creative क्रिएटिभको लागि अझ बढी मागको पनि ड्राइभिving गर्दैछ। डिजिटलको अर्को प्रमुख प्रभाव यो हो कि यसले विशिष्ट दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न कुशल बनाएको छ, र विशेष व्यक्तिहरू, रचनात्मकका विशेष टुक्राको साथ।
डाटा र नयाँ उपकरणहरूले क्रिएटिभको प्रकृति परिवर्तन गरेका छन् - डिजिटल मात्र परिवर्तन भएको छैन कसरी टुक्रा वितरित गरियो, तर कसरी त्यसलाई कसरी बनाइन्छ। अंशमा, यसले नयाँ उपकरणहरू, जस्तै हार्डवेयर र सफ्टवेयरको रूपमा सिर्जनात्मक विकासको लागि रूप लिएको छ।
क्रिएटिव्सले स्वचालन र एआईमा बढ्दो भरोसा गर्न सुरु गरेको छ - कसरी रचनात्मक धेरै धेरै टुक्रा को विकास गर्न को लागी धेरै ठूलो सहयोग र पुनरावृत्ति लिन को ठूलो पैमाने मा ठूला बजेटहरु लाई सक्षम गरीरहेको छ? एक ठूलो कारक, र डिजिटलको अर्को परिवर्तनकारी पक्ष, स्वचालन भएको छ।
क्रिएटिभको डेमोक्र्याईजेसनले टेलेन्टलाई पहिले भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण बनाएको छ - एक मुख्य तरिका डिजिटल रचनात्मक रूपान्तरण भएको छ कि यो यसलाई प्रजातन्त्रता छ; स्मार्टफोन र सोशल मिडियाको साथ लगभग जो कोहीले पनि अनलाइन साझेदारी गर्न सक्दछन्। यसले उपभोक्ताहरूको सामग्रीको बढ्दो बाढीको लागि नेतृत्व गरेको छ, सिर्जनात्मक मात्र होईन।
यहाँ पूर्ण इन्फोग्राफिक छ, कसरी डिजिटल रचनात्मक परिदृश्य रूपान्तरण भएको छ.
टैग: aiकृत्रिम बुद्धिस्वचालनरचनात्मकतथ्याङ्कलोकतान्त्रिकरणढाँचाहरूइंफोग्राफ़कनिजीकरणप्लेटफार्महरूप्रोग्रामेटिकप्रोग्रामेटिक विज्ञापन